PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-09-27 - Vela bahleke
Isolezwe lesiXhosa - 2018-09-27 - IINDABA - NoSonwabo Yawa
Uyazi abantu abadala ndiyabathanda, kakhulu kunjalo nje, qha bathi bakufikelela kwinqanaba elithile apha ebudaleni, ubone ukuba ngoku banenkani le yabantwana abancinci.
Phofu ke ukhe wathi omnye umntu siyincokola le nto, abantu xa sele bebadala ingqondo iye ibuyele ebuntwaneni, nangona ndingayazi loo ndawo kuba andikagugi, kodwa ndingafane ndingqine kweli cala ndikwaziyo ukulibona, nalapho uye umbone sele engasakwazi ukuhamba ekubeni ebekade ezihambela, engakwazi ukuthetha ngamanye amaxesha de abanye bazimoshele nokuzimoshela.
Kwelo ke icala ndiyabubona ubuntwana. Lo bawo akafundanga ubuya ezimayini ze avalele imali yakhe ebhankini, kubekho le ayibeka emzini wakhe nalapho kwakuthi kwakudingeka into ethile abakhuphele ngaphandle endlwini ze akhuphe loo mali kwindawo efihlakeleyo neyaziwa nguye yedwa.
Rhoqo xa eye edolophini ebeye athi akubona imigca ebhankini ngaphandle abuze ukuba yimigca yantoni leyo, aphendulwe ngelithi ngabantu abafuna imali apho ngaphandle kwimatshini.
Naye ebeye afole ze ayikhuphe abuye ayibuyisele ngaphakathi abaxelele ukuba “EYAM IMALI NDIFUNA IGCINWE APHA NGAPHAKATHI, HAYI NGAPHANDLE KUBA BAZA KUYIGQIBA ABA BANTU BAFOLE NGAPHANDLE” – abo basebenzayo bebeye bamhleke umntu omkhulu besithi uzigugele.
Ngenye imini uthe akubona loo migca waya kukhupha eyakhe imali wafika sele ingaphelelanga ze wangena ngaphakathi enomsindo “NDANDINGATSHONGO UKUBA IMALI YAM NDIFUNA IGCINWE NGAPHAKATHI HAYI NGAPHANDLE, NGOKU IYASHOTA AYISAPHELELANGA!” Bazame ukucacisa besithi ngela xesha emane eyikhupha ibiye itsalelwe intwanana yokusebenzisa la matshini.
Yho! wema entla umntu omkhulu eyifuna apha eyakhe imali kuba babelibele kukumhleka bengamxeleli ukuba ngokumane eyikhupha eyifaka iza kucutheka!